Ezinye izindlela ezimbili zokukhipha izinhlelo ze-Android | Izindaba zamagajethi
Lapho sinomakhalekhukhwini wethu (kungaba ifoni noma iThebhulethi) kungenzeka ukuthi safaka inani elikhulu lamathuluzi kamuva, esingawutholi umqondo. Ngaleso sikhathi esinembile kulapho sizinikezela khona ukuzama ukuthola ukuthi yiziphi izindlela ezifanele kakhulu zokukhipha Izicelo ku-Android.
Kepha mhlawumbe othile uyabuza Kungani kufanele ngikhiphe izinhlelo zokusebenza ku-Android uma zingasindi kakhulu? Impendulo ilula kakhulu, ngoba uma sandisa amathuluzi amaningi kumadivayisi wethu weselula, indawo lapho begcinwe khona izogcwala futhi ekugcineni, ngeke sibe nokuningi esizokugcina nokukufaka. Ngakho-ke, uma sibheka ukuthi ezinye zalezi zinhlelo zokusebenza ze-Android asizisebenzisi ngokubaluleka okukhulu, kungani-ke uqhubeka ukuzigcina kukhompyutha yethu?
1 Okokuqala okunye ukukhipha Izicelo ku-Android
2 Enye indlela yesibili yokukhipha Izicelo ku-Android
Okokuqala okunye ukukhipha Izicelo ku-Android
Isifundi nabasebenzisi balolu hlobo lwedivayisi yeselula nakanjani bazothola usizo olwengeziwe kwi-inthanethi lapho bekhipha Izinhlelo zokusebenza ze-Android, yize bevame ukusebenzisa izindlela ezingaphumeleli kalula nokuthi ngesikhathi esithile, zinzima kakhulu ukuzikhipha. Isibonelo salesi sici sokugcina sitholakala ekunconyweni kwe- fometha okokusebenza noma ubuyele kusimo se- «Factory» kokufanayo, okuzomane kususe yonke into kepha kuzosiphoqa ukuthi siphinde sifake futhi, zonke lezo zinhlelo esisebenze ngazo isikhathi eside.
Ngaphandle kokuthola lokhu noma ezinye izindlela ezinamandla, ikhono lokukhipha Izinhlelo zokusebenza ze-Android Kuyinto elula kakhulu ukuyenza, kepha ngokubheka okuthile esizokhuluma ngakho ngalezi zinyathelo namathiphu ngasikhathi sinye:
Okokuqala siqala uhlelo lwethu lokusebenza lwe-Android.
Ngemuva kwalokho sichofoza kusithonjana Isethaphu etholakala kudeskithophu yohlelo lwethu lokusebenza lwe-Android.
Sizokhipha ngokushesha iwindi lokumiswa kwesistimu.
Sithola ibha eseceleni ngakwesokudla lapho kukhonjiswa khona ezinye izigaba nemisebenzi.
Phakathi kwabo sikhetha lowo othi Aplicaciones.
Ngakwesokudla saleli bha kuzovela zonke izinhlelo zokusebenza esizifakile, kufanele sizame ukuthola leyo esivele sinentshisekelo kuyo. Kepha ngaphambi kokukhipha lezi Izinhlelo zokusebenza ze-Android Endaweni esizithola sikuyo, kufanele siqale ngokukhipha imininingwane ethile ejwayele ukurekhodwa futhi ehlala njengamakhukhi amancane ezindaweni ezigcinelwe idivayisi yethu. Ikakhulu, kufanele sizame uku:
Susa izilungiselelo ezizenzakalelayo.
Ngemuva kokwenza le misebenzi emi-3, manje singachofoza kusithonjana esithi "Khipha" okuyingxenye engenhla, ngakho-ke uhlelo lokusebenza luzoshiywa ngaphandle kwesistimu yethu ye-Android futhi ngaphandle kwanoma yimuphi umkhondo.
Enye indlela yesibili yokukhipha Izicelo ku-Android
Manje, uma ngasizathu simbe ungakwazi ukuthola uhlelo olufake kuhlelo lwakho lokusebenza lwe-Android, kuzofanela usebenzise enye indlela yokufeza le nhloso; Kule ndlela esizoyisho, umsebenzisi kuzofanela asebenzise i- -Google Play, kufanele wenze okulandelayo:
Thola isithonjana se-Google Play kudeskithophu ye-Android.
Chofoza kulesi sithonjana.
Iwindi lizovuleka ngesixhumi esibonakalayo se-Google Store.
Sichofoza inketho «Aplicaciones»Kutholakala ngaphezulu kwesokunxele.
Kusukela kokukhethwa okubonisiwe sikhetha «Izinhlelo zami zokusebenza".
Ngalesi sikhathi singabona ukubonwa okwenziwe kwaba ngokwakho nezinhlelo zokusebenza esizifakile kulezi zinhlelo zokusebenza ze-Android; Ngasohlangothini lwesobunxele kuzoba nebha, lapho zonke lezo zinhlelo zokusebenza esizifakile nalabo abalinde ukuthola isibuyekezo kithina bezobakhona. Kumele nje sibheke kule bha eseceleni ngohlelo lokusebenza esifuna ukulikhipha ukuze silikhethe.
Yilokho kuphela okudingeka sikwenze khipha Izinhlelo zokusebenza ze-Android usebenzisa indlela ye-Google Play isitolo.
Yenza lo msebenzi we khipha Izinhlelo zokusebenza ze-Android inenhloso eyinhloko, futhi lokho wukuthi wonke lawo mathuluzi esiwafake ohlelweni lwethu lokusebenza ngokuvamile zihlala kulokho iningi lethu elikwazi njenge-RAM, efanayo ezogcwala ngokushesha uma singazi ukuthi singaphatha kanjani lolu hlelo lokusebenza. Umsebenzisi onolwazi oluningi uzofaka ukumiswa kohlelo uku-oda ukuthi ezinye zalezi zinhlelo zithuthelwe kwimemori ye-Micro SD noma esikhaleni sangaphakathi sedivayisi.
Imininingwane engaphezulu - I-Opera WebKit ye-Android manje ku-Google Play
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Software » Ufuna indlela engcono kakhulu yokukhipha Izinhlelo Zokusebenza ku-Android